संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता, आज के हुन्छ ? – ZoomNP
संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता, आज के हुन्छ ? प्रकाशित मिति: आइतवार, कार्तिक २८, २०७३ समय - १०:२८:२१ काठमाडौं, २८ कात्तिक । संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउन आज पनि दलहरुबीच छलफल हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । अबको तीनदिनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसक्नु भएकाले प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढेको हो ।
शनिबार भएको छलफलअनुसार ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष जुट्ने भएका छन् । सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन प्रस्तावका मतभेद र अस्पष्टता समाधान गर्न सोमबार मोर्चासहितको संयुक्त बैठक गर्ने पनि तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीले पूर्व र पश्चिमका पाँच जिल्लाबारे मोर्चालाई मान्य हुने गरी विकल्प सुझाउनसमेत देउवालाई आग्रह गरिसकेका छन् । एमालेले भने नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमांकन गर्दा प्रदेश ५ र ६ का पहाडी जिल्लाको नक्सांकन चलाउनुपर्ने हुँदा फेरि विरोध उठ्न सक्ने भन्दै असहमति जनाइरहेको छ ।
मोर्चाले भने प्रधानमन्त्री चुनावका दिन आफूसँग गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संशोधन नभए मंसिरबाट आन्दोलनमा जाने बताएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा समेत मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव बालुवाटार गएनन् ।
मोर्चाले सहमतिबिनाको संविधान संशोधन प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । मोर्चाभित्रै पनि नागरिकताको बारेमा विवाद रहेको समाचारहरु समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।